Umqondo for engadini: ngezandla zabo, ungakha eliqoshiwe landscape
Lapho uhlela indawo engadini kubalulekile ukuthi umqondo engadini, ngezandla zabo esakhiwe, baqhubeka kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni.
Garden Isitayela - phezulu landscape design
Bambalwa kubantu akusho dream yohambo ezikude emhlabeni wonke. Ngeshwa, hhayi wonke umuntu okwenzayo lokhu. Kodwa wonke umuntu unethuba ukudala kusayithi lakho belingisa ekhoneni iplanethi yethu. Uma wayefisa, kungashiwo komculo umqondo engadini ngezandla zakhe e isitayela ezishisayo. Ukuze wenze lokhu, yebo, kuzothatha isikhathi, ngoba cypresses omelela izimila lezi zindawo, ayibi phakathi nonyaka, hhayi ezimbili. Ubuningi amadamu yokufakelwa is afakwe isitayela landscape ngempumelelo.
French design isitayela engadini isayithi
Classicism njalo predominated e ezweni odumile uCharles Baudelaire. Shono engadini French ngokuthi "njalo", ngoba kukhona ebusa geometry, ngokuvumelana okunzima, kuphele ukuzidla onesizotha. Ehlanganiswe lo mbono ingadi ngezandla zakhe akulula kangako, ngoba ngaphandle imingcele ecacile futhi imbali ezindimeni imizimba amanzi kudingeka kucatshangelwe ngokucophelela kanye nezinye izingxenye design. Lezi izinto eziqoshwe ngamathambo ezindlovu okusikhumbuza yobuciko lasendulo. Ungathenga noma iyale izibalo ukhonkolo, ukulingisa lasendulo. Kodwa-ke (ngekhono ngokwanele) kungaba imikhiqizo efanayo for engadini ngezandla zakhe ukuze akhiphe ukwakhiwa Foam. konke okweqile inqanyulwa ngommese obukhali, ebaziwe ngomumo embozwe ungqimba usimende latex upende - futhi lokhu iyingqayizivele azalwe Foam, efana Aphrodite wasenganekwaneni! Lo mklamo ukhonza njengelungu Umqondo olukhulu engadini ngezandla zakhe ngesikhathi sokubhaliswa amasayithi emahhovisi kahulumeni.
imibono Interesting engadini ngezandla zakhe
Ukuze ukuhlobisa ingadi noma uhlela eseduze ekotishi noma womzalwane, ungasebenzisa yasekuqaleni imibhede mpo. Kwahlelwa ezinjalo yobuciko - kungenjalo ngeke akwazi ukudalulwa igama, futhi - kwi awalethe eziklanyelwe. Ukunika ke ukuma efiselekayo, ongayifinyelela umphumela ukubonakala endaweni inyoni enhle izimbali, izinyosi omkhulu kodwa bejabule, Unicorn imilingo. Futhi ungakwazi ukudala i okumangalisayo siqu Uhlezi endaweni ezindaweni ezishisayo, sizibeke Echibini elithile elincane ngetshe yemvelo lawela izitshalo ezingavamile. Sikwazi ukukhula izihlahla ezincane thini ukuze lapho kuqala kubanda kungaletha kubo ekamelweni.
Yebo, futhi ukushisa-onothando izimbali zisetshenziswa akudingeki itshalwe ekhanyayo kanye izimbiza, ukugqiba ngokubakhanda ngamatshe. Ukubeka lapha etafuleni itiye namabhentshi futhi Ababazi bakha izihlalo, umklami Abadali abanikazi izimo ukuphumula okuhle.
Topiary engadini noma cottage
Namhlanje yimpumelelo lokhu landscape design njengoba topiary. Le ndlela eyingqayizivele ehlathini ilungiswe noma isihlahla eziqongweni ukubenza uhlobo oluhlaza eziphilayo ukubaza: imifanekiso yezilwane, inganekwane nezinhlamvu kanye wonke ngisho display. Bheka yobuciko ezinjalo ngokucebile ukuhlobisa ndawo ngendlela engokwemvelo, ngaphandle kokusebenzisa zokwenziwa izinto, okuyinto ibaluleke kakhulu ngoba nendalo nempilo yomuntu. Ikakhulukazi azibonayo ngenjabulo izingane topiary - kungcono uhambo amazing ibe iphupho!
Izincomo sendlela ukuhlanza elingenamikhono mutonovuyu ekhaya
Snowplows ngoba indlu ngezandla zakhe kusukela Chainsaw
Isikhathi Machine: indlela yokwenza? Ezinye iseluleko esisebenzayo
Indlela ukuhlanza soda esiliva ekhaya
Spray Liquid amanxeba - ilondolozwe kusuka imihuzuko!
Keti Makgrat: Biography, umsebenzi, impilo siqu
Ukuthuthukisa itafula izingane. superigrushka Merry
Black nomhlophe phansi elingaphakathi: kanjani izibalo. Black nomhlophe phansi egumbini lokugezela futhi ekhishini
Ngokuvamile abantu baphuka izinqulu wethambo zygomatic nge ukufuduka
Iviki lesi-6 lokukhulelwa: kwenzekani, i-ultrasound nesisindo se-fetus. Ukukhulelwa: umbungu 6 amasonto (isithombe)
Indlela yokwenza i-generator Foam ukuba zigeze izandla